Maitiro ekuita kumeso ID kukuziva iwe kana iwe ukapfeka magirazi ezuva | IPhone nhau
Maitiro ekuita kumeso ID kukuziva iwe kana iwe ukapfeka magirazi ezuva
Zhizha riri kuuya, uye senguva dzose tinoshandisa gafas de sol. Uye isu tatova neyakajairika roll. Inoshandiswa kuvhura iPhone yedu neFace ID, tinoona kuti kana tikapfeka magirazi, haitizive. Pane hunyengeri hushoma kuti utore mudziyo wedu utizive nemagirazi ezuva.
Asi kana isu tikamutsa hunyengeri uhwu, tinorasikirwa nechengetedzo yakawanda mukucherechedzwa kwechiso. Toti kana uchinyepa iyo NAP Chinyararire, mumwe wako anogona kuvhura yako iPhone, nekuti Face ID ichazviita kunyangwe ivo vakaona kuti wakarara. Iwe uchazoziva kana zviripo kana kuti kwete ...
Isu tatova pakati pezhizha uye senguva dzose isu tine dambudziko rakafanana. Tiri kupfeka magirazi ezuva, uye yedu iPhone haigone kuvhurwa uchishandisa Face ID. Ndiwo mutengo waunofanirwa kubhadhara kuti uwane imwe yeiyo masisitimu epasirese ekuchengetedza kumeso. Hapana magirazi, kana masiki.
Chiso ID inosanganisira mbiri yekuchengetedza system. Kunze kwaizvozvo iva nechiso chako mu3D yakachengetwa uye yakavhurwa kana ichiongorora maparamende ayo, inoongorora zvakare kuti uri kutarisa parunhare. Izvo zvinodzivirira mumwe munhu kubva kukiyinura paunenge wakarara kana kutsauswa uchitarisa chimwe chinhu.
Uyu tarisa kutarisa Izvi ndizvo zvinodzivirira kumeso ID kubva pakuvhura kana wakapfeka magirazi ezuva, sezvo isingakwanise "kuona" kana maziso ako akatarisa parunhare. Izvi zvinogona kuremadzwa nemawoko. Saka kana iwe ukapfeka magirazi ezuva, yako iPhone ichavhurwa kana iwe uchiratidza iyo chiso chako. Asi zvirokwazvo, yeuka kuti kana iwe wakarara uye mumwe munhu akaisa yako iPhone pamberi pechiso chako, ichavhurwa.
Zvino zvaunoziva zvakanaka nezvakaipa zve "hunyengeri" uye uchida kuzviedza, ita zvinotevera:
Vhura Chiso ID uye kodhi
Pinda kodhi yako yekuwana
Uncheck «Inoda kutariswa kumeso ID
Verenga yambiro uye Gamuchira
Unogona kutomboedza kana Face ID wakavhurwa uine magirazi ezuva. Zvinogona kubva parudzi rwegirazi iyo isingashande. Kubva pano, sarudzo ndeyako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuita kumeso ID kukuziva iwe kana iwe ukapfeka magirazi ezuva
Mune yangu nyaya, ine iPhone X, inondiziva ini ndisinga regedze "inoda kutariswa" uye ndisina kubvisa magirazi ezuva. Muchokwadi ini ndakaedza kuyedza kuivhura nemagirazi ezuva uye kutarisa kudivi uye harivhure, uye pandinotarisa maziso kuscreen, nguva dzose nemagirazi ezuva, anovhura. Kwayedzwa nemhando mbiri dzakasiyana dzemagirazi (ane lenzi rakasviba) uye inoshanda pasina dambudziko.
Ini, saJM, handina matambudziko nemamwe magirazi ezuva, asi kune rimwe divi, nevamwe andinawo, kunyangwe kudzima "inoda kutarisirwa" hakushandi. Ini ndinofunga zvichave nekuda kwerudzi rwe lens kana mafirita ayo yaanotakura; Handizivi.
Aya ndiwo matsva eMagnifier basa muIOS 14
Apple inosvika pachibvumirano nekambani yekugadzira yaIdris Elba kuti igadzire zvirimo zveApple TV +